कुर्सी छोड्नै नसक्ने १३ अध्यक्ष (भिडियो रिपोर्ट) | Kendrabindu Nepal Online News
कुर्सी छोड्नै नसक्ने १३ अध्यक्ष (भिडियो रिपोर्ट)
१२ आश्विन २०७६, आईतवार १९:००
कुर्सीको भोक कसलाई हुँदैन र ? तर कतिपय व्यक्ति भने त्यस्ता हुन्छन् जो एउटै कुर्सीमा वर्षाै वर्ष बस्दा पनि अघाउँदैनन् ।
उनीहरूको कुर्सीमोह साम्य हुँदैन । बरु उनीहरूलाई त्यही कुर्सीमा टाँसिइरहन मन लाग्दो हो । हेर्दा त्यस्तै देखिन्छ, यथार्थ पनि पक्कै फरक नहोला । हो, आज हामी त्यस्ता केही सदाबहार नेतृत्वकर्ताहरूको प्रसंग उप्काउँदै छौं, जो वर्षौदेखि संघ–संस्था वा पार्टी प्रमुख भएर जीवन बिताइरहेका छन् ।
के के कारणले पार्टी वा संस्थाको नेतृत्वमा टाँसिएर बसिरहेका छन् त उनीहरू ? यस सम्बन्धमा हामी फोकस छैनौं । तर, लामो समयदेखि एकलौटी रूपमा पार्टी वा संस्थाका प्रमुख कुर्सीको पर्याय बनेका उनीहरू जानकारीसम्म दिनेछौँ ।
Prevभारतले पहिलो पटक जित्यो साफ यू–१८ फुटबल च्याम्पियनसिपको उपाधि
बोके दाह्रीको संदेशमुलक दशैं गीत सार्वजनिक (भिडियो सहित)Next